khasaaro ka dhashay dagaal ka dhacay Deynuunaay - Awdinle Online
khasaaro ka dhashay dagaal ka dhacay Deynuunaay
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo maanta siyaabo kala duwan uga dhacay deegaanka Deynuunaay oo qiyaastii 25 KM dhinaca Bari ka xiga magaalada Baydhabo xarynta KMG ah ee maamulka K/Galbeed.
Dagaalka koowaad oo dhacay saaka ayaa yimid, kadib markii dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen deegaankaasi, iyagoo kala wareegay ciidanka dowladda.
Al-Shabaab dagaalyahannadeeda ayaa muddo kooban waxa ay ku sugnaayeen Deynuunaay, iyagoo meel fagaare ah kula hadlay dadka deegaanka.
Wararka ayaa sheegaya in kadib weerar rogaal celis ah ciidanka dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ku qaadeen halkaasi, kadibna uu markale dagaal saacado badan qaatay uu dhex-maray labada dhinac, kaas oo la’isku fara saaray.
Ugu yaraan illaa lix askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda ayaa dagaalladan ku dhintay, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan milatariga Soomaaliya.
Sidoo kale saraakiishaa ayaa tilmaamay inay dib u qabsadeen gacanta ku heynta deegaankaan oo ah mid istaraatiiji ah, kuna yaalla gobolka Baay.
Ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalladaasi, balse xaaladda ayaa ah weli mid aad u kacsan.
Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ee ku yaalla gobollada Baay & Bakool.
Previous articleLABA MIYAY ISKU HELAYSAA ITOOBIYA ?
Next articleGuddiga doorashada Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo la magacaabay